Hiran State - News: Baaralamaanka Somaliya noo maalmaha soo socda kala xaqiijin doona in Soamliya tahay wadan xor ah iyo in waxii la doono laga sameysan karo.
Baaralamaanka Somaliya noo maalmaha soo socda kala xaqiijin doona in Soamliya tahay wadan xor ah iyo in waxii la doono laga sameysan karo.
Mogdisho: (hiranstate.com)- Markaad aragto faragalinta shisheeye ee lagu hayo dalka Somaliya waxaa kuu soo baxeysa in uusan dalka Somaliya aheyn dal xor ah.
Xidhibaanada baarlamaanka Somaliya kordhinta ay mudada kororsadeen sax iyo qaladba waa mudanayaal baarlamaan oo dalkoodii jooga, waxaa kale oo iyaduna shacabka iyo dalka Somaliyeed ceeb iyo lama arkaan ku noqon doonta hadii go,aankooda ka laabtaan mudanayaasha baarlamaanka oo ay aqbalaan soo jeedinta ka imaaneysa qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka oo danahooda gaarka ah ka dhax raadsanayo qalalaasaha uu ku jiro dalka Somaliya.
Hadii baarlamaanku iska indha tiro qatarta ku soo fool leh oo ay noqdaan kuwo laga maamulo dalka dibadiisa waxey taasi muujineysaa ineysan Somaliya aheyn dal xor ah. hore mudada baarlamaanka waxaa u iclaamin jiray wadamo shisheeye ah waana markii ugu horeysay ee ay baarlamaanka Somaliya iyagu iskood go,aan u qaataan tan iyo markii la soo dhisay golaha baarlamaanka.
Aduunweynaha waa macquul hadey yiraahdaan sedax sano dhaqaalo uma heyno 550 mudane, laakinse hadey isticmaalaan ereyo u muuqaal ek diidmo taasi micnaheedu waa in uusan jirin dal la yireaahdo Somaliya oo calan iyo hanaan dowladeed leh.
Talaabada u furan baarlamaanka waa iney 72 saac gudahood go,aan muuqda oo ay aduunyadu mowqifkooda ku ogaadaan qaataan waa hadii gudoomiyaha baarlamaanka Somaliya iyo mudanayasha baarlamaanka ay doonayan iney beesha caalamka tusiyaan dalka Somaliya inuu yahay dal ay dagaalo sokeeye ka socdaan laakinse u madax banaan arimahiisa u gaarka ah.
Dabcan qaar mudanayasha baarlamaanka Somaliya ka tirsan waa aqoonyahano waliba dalka Somaliya xilal kala duwan ka soo qabtay oo waaya aragnimo u leh arimaha noocaan ah ee lagu bahdilayo dalka iyo dadka Somaliyeed. mudanayasha baarlamaanku waa iney xooga saaraan sidii ay bal horta ula xisaabtami lahaayeen xukumada Farmaajo iyo golaheeda wasiirada ee iyagu xukun jaceylka ay qabaan 1 sano oo fowdo ah ku darsaday mudadii ay ku egeyd jiritaankooda iyadoo ay ujeedadoodu tahay hanti abuurasho.
· admin on March 28 2011 16:46:20 · 0 Comments · 1832 Reads ·
14,569,376 unique visits